Dilka sumadda ee daanyeerka - Afrikhepri Fondation
Welcome PSYCHART DAAWEYNTA
Saaxiibtinimada Dibadda-Zirignon GROBLI
Dilka muuqda ee dabka
Pär Zirignon Grobli
SIsaga oo matalaya sidii halyeeyga sheekada ee casriga iyo cilmu-nafsiga sidii raadinta bilowga ah, bukaan-socodku wuxuu socodsiiyaa safarkiisa isagoo ka duulaya dhimashadiisa, oo loo maleynaayo inuu yahay bahal liqay, kuna yaal taageero farshaxan, goob faneed halkaas oo halganku ka dhacayo. geesi. Halganka Gigantomachic inta lagu gudajiray kaas oo, baabi'iyay, daanyeerka ayaa si joogto ah uga soo kabanaya qashinkiisii.
wajigan koowaad ee hawlaha psychart-ku-daweyn u bara qaataha ah in iska hor imaad ka sadistic waa nooca ugu baahan, maxaa yeelay garan mayno dhamaadka assignable. Marka la qeexo burburinta abuuraa falalkooda cusub.
Wejigii labaad ee therapy ah psychart waa meesha grantee ah, laakiin mar dambe ma ay, oo Sugi dhimashadiisa, racfaan ka qaadan doonto in daryeelka Aabbaha transcendent si dhex dhexaadin ay iska hor imaad dilaaga ah la yaxaas arxan. Wajigan waxa meesha grantee soo maray finitude aadanaha iyo sarrayntiisa Aabbaha waa muhiim maxaa yeelay waxa ay inaugurates humanizing wakhtiga xadgudubka iyo magdhaw calaamad ah, by habka of hawlaha farshaxanka hal abuur leh.
Waxaa loogu yeedhay in lagu bixiyo qanacsanaanta astaan-ahaaneed, cilmu-nafsi-daaweyntu waa ka-hortagga halganka halganka leh ee lagu baabi'inayo.
GROBLI Zirignon, therapist art
1 cusub oo ka yimid € 16,83
Iibso 16,83 €
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Oktoobar 21, 2020 5:53 am
Halyeeyadii xasuuqii iyo Namasiyadii (Namibia) ee ay kala kulmeen gumaystihii Jarmalka sanadkii 1904